SADDEXDAN Ciyaartoy Ee Real Madrid Ka Tirsan Ayaa Barcelona U Rumaynaya Riyada Neymar JR Isla Markaana Los Blancos Kahor Istaagay Saxeexiisa - Gool24.Net
SADDEXDAN Ciyaartoy Ee Real Madrid Ka Tirsan Ayaa Barcelona U Rumaynaya Riyada Neymar JR Isla Markaana Los Blancos Kahor Istaagay Saxeexiisa
Waxa halkooda kasii socda wararka xanta ah ee Neymar JR la xidhiidhinaya inuu ka bixi doono kooxdiisa Paris Saint-Germain kuwaas oo ah kuwo maalinba meel u dhacaya.
Neymar ayaa inta ugu badan suuqa xagaagan lala xidhiidhinayay inuu ku laaban doono kooxdiisii hore ee Barcelona balse shalay ayuu soo baxay warkale oo yaabkiisa wata kaas oo ah in PSG ay la doonayso inuu u wareego Real Madrid.
Iyadoo la ogsoon yahay xidhiidhka aan wanaagsanayn ee dhinaca suuqa kala iibsiga kaga soo dhaxeeyay Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayuu madaxweynaha Paris ee Nasser El-Khelaifi khadka taleefanka ku wacay dhigiisa Madrid ee Florentino Perez.
Nasser ayaa la sheegay inuu Mr Perez u bandhigay saxeexa 27 jirka ree Brazil isaga oo diidaya inuu Barcelona uga wareego balse jawaabta Madrid ayaa noqotay mid diidmo ah.
Haddaba Saddexda xiddig ee kala ah Eden Hazard, Vinicius JR iyo Rodrygo ayaa loo arkaa kuwa sababta u ah in madaxweyne Perez uu iska diido fursadan qaaliga ah.
Vinicius ayaa xilli ciyaareedkii hore wacdarro kusoo dhigay Santiago Bernabeu waxaana uu ahaa mid kamida sumadihii wanaagsanaa ee lagu soo dhex arkay xilli ciyaareedkaas oo musiibo ahaa imaatinka Neymar ayaa koritaankiisa ciyaareed dili lahaa.
Si lamid ah Rodrygo ayaa ah mid da’yar oo koritaankiisa ciyaareed uu musiibo ku noqon doono saxeexa ciyaartoy kasta oo la boos ah oo ay kooxdiisu soo samayn doontaa.
Ugu dambayntiisa sababta ugu weyn ee diidmada Los Blancos ayaa ah Hazard maadaama oo ay kooxdu xilli horeba lacag badan kagala soo wareegtay Chelsea ayaysan markale lacag sidaas u weyn ku bixin doonin saxeex kale.